Donny van de Beek kuma soo bilaaban doono kulanka Manchester United ee Premier League waqti uun, sida uu sheegay tababare Ole Gunnar Solskhjaer.
Solskjaer ayaa sheegay in Donny van de Beek uu u baahan doono waqti uu kula qabsado kooxda koowaad ee Manchester United, inkasta oo uu wax badan ku qaatay xagaagii.
Van de Beek, oo 23 jir ah, ayaa ahaa saxiixii ugu weynaa ee ay Man United sameyso xagaagan ka dib markii ay 40 milyan oo ginni ugala soo wareegtay kooxda Ajax, waxaana uu shabaqa soo taabtay kulankiisii ​​ugu horreeyay ee Red Devils bishii hore. Sebtember waxay 3-1 ku garaacday Crystal Palace.
Si kastaba ha noqotee, Donny van de Beek ayaa ku soo bilowday labo kulan oo Premier League ah Manchester United Premier League, mid ka mid ah waqtigii nasashada kulankii West Ham, iyadoo Bruno Fernandes uu ku guuleystay United. waxay ku dhamaatay 1-0.
Van de Beek ayaa la filayaa inuu caawa ku soo bilowdo semi-finalka Carabao Cup ee ay la ciyaarayaan Man City, laakiin MEN ayaa shaaca ka qaaday in ciyaar sameeyaha uusan bilaaban doonin.
Wargeysku wuxuu ku celiyey hadalki hore ee Ole Gunnar Solskj :r: “Donny sifiican ayuu ula ciyaaray fursadihiisa. Mararka qaar waxaan u maleynayaa inay goor hore tahay in la dhaho ma ciyaarayo wuuna fashilmay, laakiin waad ogtahay inaan hada arki karno.
“Tusaale ahaan, Victor Lindelof iyo Fred ayaa tusaale u ah. Waqti ayey ku qaadatay iyaga, hadana waxay yihiin ciyaartoy aad muhiim ugu ah kooxdeena. Taasi waa waxa Donny sameyn doono.”
Solskjaer ayaa sharaxay sababta uu Donny van de Beek ugu dhibtoonayo inuu helo fursado joogto ah oo kooxda koowaad ah, maadaama uusan wali si buuxda ula qabsan ciyaarta: “Wuxuu ku biiray koox tayo leh oo khadka dhexe ah wuxuuna la tartamay Bruno. Juan Mata, Jesse. wuxuu leeyahay ciyaartoy badan oo khadka dhexe ah sida Paul Pogba, Nemanja Matic, Scott McTominay iyo Fred, Donny sifiican ayuu u shaqeeyaa markuu soo galo. ”
Jose Mourinho: Kooxdiisa ayaa ku guuleysatay koobka